Fahamka SOPA | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 8, 2011 Khamiista, Diseembar 8, 2011 Douglas Karr
Haddii aad waqti siiso inaad ka fikirto, internetka runti waa qaybta kaliya ee dhaqaalaha Mareykanka ee hadda si fiican u socota. Ma aaminsani inay jirto wax lala yaabo inay sidoo kale tahay qeyb ka mid ah dhaqaalaha Mareykanka oo aysan dowladdu bilaabin inay faraha gasho. Bishii la soo dhaafay, waxaa jiray sharciyo muhiim ah oo loo codeeyay lana diyaariyay kuwaas oo u muuqday inay wax weyn ka beddelayaan.
Iyada oo loo qarinayo in aan u baahanahay sharci dheeri ah oo xuquuqda daabacaadda ah oo internetka ah ILAALO Sharciga IP waxaa lagu horumariyey golaha guurtida iyo Jooji Sharciga Budhcad-badeednimada ee Internetka (SOPA) guriga dhexdiisa. Labadooduba waa silsilad hanjabaad ku ah biilka faafreebka internetka ee COICA sanadkii hore. Si la mid ah kii ka horreeyay, sharcigan wuxuu casuumayaa halista amniga internetka, wuxuu handadayaa hadalka khadka tooska ah, wuxuuna caqabad ku yahay hal-abuurnimada internetka.
Ka baro wax badan oo ku saabsan SOPA boggan 'Infographic', waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa ganacsiga iyo hal-abuurka internetka. Iyo inta badan oo dhan - talaabo qaado oo ogeysii wakiiladaada inaadan u dulqaadan doonin:
Infographic ka Xigashooyinka Caymiska Ganacsiga waxaana helay saaxiib Jeff Jockisch Google+!
Tags: effaasaaska xuduudaha elektarooniga ahxoriyaddainternetbeerta
Pagelines 2.0 waxay soocelinaysaa WordPress Theming iyo Ecommerce
Top 20 Solutions Automation Suuq